U adeegso wakiil wakiil ahaan xaqiijinta Firefox oo leh CNflix | Laga soo bilaabo Linux
U adeegso wakiil wakiil ahaan xaqiijinta Firefox oo leh CNflix
Mozilla Firefox Waa biraawsar aad u fiican, laakiin nasiib daro waxaa jira wax ku saabsan oo aanan waligey jeclaan waana taas xaqiiqda ah inay soo bandhigto dhibaato markii la daalacanayo gadaal wakiil ay isticmaalaan. NTLM (borotokoolka loo isticmaalo Windows Servers) iyadoo la adeegsanayo isticmaale u baahan xaqiijin.
Dhibaatadu dhab ahaantii waxay tahay inaan si joogto ah u helno daaqad weydiisanaya username iyo lambarka sirta ee codsi kasta oo http ah, waxayna u noqotaa madax xanuun. Markii la sii daayay Firefox 30, kooxda horumariyaha waxay go'aansadeen in ay joojiyaan dib u soo celinta xaqiijinta NTLM marka hore (in kasta oo kaliya NTLMv1), sababo nabadgelyo awgood.
1 Adeegso wakiil adiga oo ku shaqeynaya Firefox adoo bedelaya halbeegga
2 U adeegso wakiil wakiil ahaan xaqiijinta Firefox oo leh CNflix
Adeegso wakiil adiga oo ku shaqeynaya Firefox adoo bedelaya halbeegga
Nasiib wanaag waxaa jira waddo dib loogu isticmaali karo dib u soo celinta sugida NTLM. Si tan loo sameeyo waxaan fureynaa tab waxaanna qoreynaa:
Wax yar ayaan jiifnaa adigoo gujinaya badhanka: Waan taxaddarayaa, waan ballan qaadayaa!.
Ka dibna waxaan ku qoreynaa aagga baaritaanka:
qiimaheeda ka badalaysa Beenta a True.
Waxaa jira qaab kale oo looga takhalusi karo arrinta ku saabsan adeegsiga wakiil oo leh xaqiijin Firefox iyadoo la raacayo borotokoolka NTLM iyadoo la adeegsanayo Wakiilka CNTLM. Si aan ugu rakibno qaybintayada aan doorbidno waxaan kala soo dagsan karnaa labada nooc xidhiidhkan. Xaaladda ArchLinux waxaan ku sameyn karnaa Yaourt:
yaourt -S cntlm
Marka la rakibo waa inaan wax ka bedelnaa feylka /etc/cntlm.conf waana inaan ka naxnaa ama aan ku darnaa khadadka soo socda dhamaadka:
Username your_user Domain yourdomain.delanet Password your_password Proxy proxy.tusserver: 3128 NoProxy localhost, 10. *, 192.168. *, * .Yourdomain.delared Dhageyso 8081
Marka laga hadlayo safka ugu dambeeya, taasi waa dekedda aan u adeegsan doonno Wakiil de Mozilla Firefox, taas oo noqonaysa sidan:
Waa in la cadeeyo taas CNTLM Looma isticmaali karo oo keliya marka aan u baahan nahay inaan u isticmaalno wakiil wakiil ah oo leh xaqiijinta Firefox, laakiin sidoo kale kombiyuutarkeennu wuxuu u adeegaa inuu noqdo wakiil wakiil ee qalabka kale ama kombiyuutarada shabakadda. Tan awgeed waa inaan ka xumaano oo aan qaabeynaa khadadka soo socda:
# Karti u yeelo ka-helitaanka kombiyuutarada kale # Gateway haa # Waxtar ku leh habka Gateway si loogu oggolaado / loo xakameeyo IP-yada qaarkood # Cadee IP-ga shaqsiyeed ama hoosaadyada hal xeer halkii khad. # U oggolow 127.0.0.1 #Deny 0/0
Taas oo ah waxa ugu horeeya ee aan sameyno aan u sheegno inaan noqon doonno a Gawaarida ka dibna waxaan go'aan ka gaari karnaa cidda la oggol yahay iyo in kale.
Hadda waa inaan kaliya bilownaa adeegga, haddii ay tahay Archlinux waxaan isticmaalnaa amarka:
sudo systemctl start cntlm.service
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » U adeegso wakiil wakiil ahaan xaqiijinta Firefox oo leh CNflix
Fikrad wanaagsan, sidaa darteed badanaa wax dhibaato ah kuma qabno inaan xaqiijiyo marin u helitaanka routerkeyga Iceweasel iyo Firefox.
Sikastaba, maqaalka hada dib u eegista lagu sameynayo, waxaan ogaanayaa in xirmooyinka la fulin karo ee Iceweasel ee XULRunner lagu mideeyay nooca 30, oo kaliya looga tagayo Iceweasel (Ma aqaano hadii wax la mid ah ay ka dhici doonaan Firefox 30 ee Ubuntu)
Wax sidan oo kale ah ayaan si ba'an u raadinayay. Mahadsanid
Ku soo jawaab Liborio
Aad baad ugu mahadsan tahay tilmaanta, aniga ayey igu dhacday dhowr jeer mana aanan ogeyn sababta.
Dhibaato isku mid ah ayaan ku qabay maalmahan ugu dambeeyay Macs-kayga: Firefox ayaa lafteeda ku cusbooneysiineysa nooca 30 mana jiro marin dheeri ah, maadaama si hufan halkan uu jiro ISA Proxy server. Aad baad ugu mahadsantahay bixinta xalkaan.
Bryan horna dijo
Aad baad ugu mahadsantahay caarada. Kaliya waxaan u isticmaalaa Firefox 30 gudaha Ubuntu, nooca 29na waxay iga codsatay xaqiijinta wakiilka (oo ay maamusho ISA Server), halka qeybta 30 ay si fudud uga baajisay safarkayga.
Waxay ahayd inaan isku dayo CNTLM labadaba Windows iyo Ubuntu, laakiin runtii CNTLM, inkasta oo lagu qoro C, waxay ka dhigeysaa socodka waxoogaa gaabis ah.
Sikastaba waad ku mahadsantahay qaybta qaabeynta Firefox.
Jawaab Bryan Horna
Linus Torvalds: "Uma maleynayo in qof walbaa uu barto qorida summada"
Distros loogu talagalay waxbarashada: xulashooyin wanaagsan